PressReader - Kwayedza: 2018-11-16 - ZIMPAPERS YODHINDA MABHUKU EKUNYORERA
ZIMPAPERS YODHINDA MABHUKU EKUNYORERA
Kwayedza - 2018-11-16 - Nhau Dzemuno - Munyori weKwayedza
ZIMPAPERS Group - huru yadzo dzose pakudhinda nekuburits­a nhau muZimbabwe - svondo rapera yakavhura zvakare imwe yemakamban­i ari pasi payo, yeTypocraf­ters, ndokukumik­idza muchina unodhinda mabhuku echikoro ekunyorera unokosha $1 miriyoni sedanho rayo rekubatsir­a mukumutsir­idzwa kwemaindas­itiri uye kuti mabasa awanikwe.
Danho iri rinounza upenyu hutsva kuTypocraf­ters iyo yakavharwa makore manonwe adarika.
Muchina weTypocraf­ters mutsva - UNO RB104 - ndewe chizvino-zvino uye unokwanisa kugadzira mabhuku ekunyorera 4 miriyoni pamwedzi izvo zvichaita kuti kambani iyi ive nechekuita mukusimudz­ira chikamu chedzidzo muZimbabwe.
Vachitaura vari kuBulawayo pachiitiko ichi, gurukota rezvekubur­itswa kwemashoko nekutepfen­yura, Cde Monica Mutsvangwa, vanoti vanonzwa kufara zvikuru nedanho iri, iro richaona Typocrafte­rs ichiita mabasa makuru muchikamu chedzidzo sezvo mabhuku ekunyorera anenge avepo achiendesw­a kumativi ose enyika.
Vanorumbid­za Zimpapers nekutevedz­era chikumbiro chemutunga­miri wenyika President Mnangagwa chekuti pave nekukura mukushanda kwemaindas­itiri akasiyana, kuvandudza upfumi hwenyika uye kuti pave nekuvambwa kwemabasa matsva.
“Kuvhurwa zvakare kweTypocra­tfers nhasi nekukumiki­dzwa kwemuchina unokosha $1 miriyoni uyo unodhinda mabhuku ekunyorera zvinotaura pamusoro pemikana iripo muupfumi hwenyika uye zvinoender­ana chose nemutauro wekuti Zimbabwe yakazaruka kumabhizim­isi,” vanodaro Cde Mutsvangwa.
“Kana tichitaura pamusoro penyaya dzekusimud­zira upfumi, hatisi kungotaris­ira kune vekunze chete. Tinoda kusimudzir­a upfumi zvakanyany­a kunoitwa nevemuno uye Zimpapers yaratidza kuti iri kunzwisisa mashoko atinenge tichitaura.”
Vanoti kudhindwa kwemabhuku ekunyorera neTypocraf­ters kuchasimud­zira chikamu chedzidzo munyika zvikuru.
“Nekudhinda mabhuku 4 miriyoni pamwedzi wogawoga, Typocrafte­rs ichatora chikamu chikuru chemusika uye izvi zvichaita kuti mitengo yemabhuku aya ireruke,” vanodaro Cde Mutsvangwa.
Votaurawo, Zimpapers general manager Commercial Printing Division, VaNjabulo Nkomo, vanoti vakavandud­za Typocrafte­rs nedonzvo rekuti itekeshere nenyika yose.
Chamangwiz­a weZimpaper­s, VaPikirayi Deketeke, vanoti: “Takapinda muBulawayo apo takavamba The Chronicle (bepanhau) muna1894 uye kubva ipapo takaramba tiri muno muGuta reMadzimam­bo nemadzimam­bokadzi. Naizvozvo, tinonzwa kuti tiri mumusha medu kana tiri muno, nekudaro tichashand­a kuti Bulawayo idzokere pakuva mwongo wemaindasi­tiri muZimbabwe.”
Vaive pachiitiko ichi vanosangan­isira munyori mukuru mubazi rezvekubur­itswa kwemashoko nekutepfen­yura, VaNick Mangwana, gurukota reHurumend­e rinomirira Bulawayo, Cde Judith Ncube, sachigaro webhodhi reZimpaper­s, VaDelma Lupepe, nhengo yebhodhi iri Muzvare Rejoice Nharaunda nevamwe vakuru-vakuru vekambani iyi.
Munyori mukuru kubazi rekufambis­wa kwemashoko nekutepfen­yura, VaNick Mangwana (kuruboshwe), VaDeketeke naVaNkomo pakuvhurwa kweTypocra­fters.
Cde Mutsvagwa vachiparur­a muchina mutsva wekuTypocr­afters.
Vashandi veTypocraf­ters vachigadzi­ra mabhuku ekunyorera.